ActiveConversion: Ziva uye Teedzera Webhu Vashanyi | Martech Zone
Chishanu, April 4, 2014 Douglas Karr
ActiveConversion inotungamira yekutevera software yemabhizinesi madiki kusvika epakati nepakati. Kutengesa kwavo uye kushambadzira mhinduro dzinobvumidza makambani kuona vashanyi vanofarira, makambani uye vatungamiriri vanokwanisa vanoshanyira saiti yako. Yakarongwa mishumo yeanotungamira anotungamira anogona kutumirwa kune ako ekutengesa timu kuti uvazivise iwo anonyanya kushama online tarisiro.
ActiveConversion's yekuteedzera tekinoroji inogona kuona email kushambadzira mugashiri chiitiko uye mhinduro kumaemail zvinopihwa. Mhinduro yacho inogona kutopa njere pamatanho emakampeni ako ekushambadzira kusanganisira kushambadzira kwepamhepo, kupurinda kushambadza, kutepfenyura midhiya, uye kutungamira vashanyi kune webhusaiti kana peji rekumhara.
Emo maemail email, ProspectAlert, inopa yekutengesa-centric maonero eruzivo rwekutungamira mukati meAlexConversion. Ruzivo rwakakosha rwunopihwa kune ako ekutengesa reps pane yavo yavakapihwa tarisiro. Iyo sisitimu inosangana neSalesforce.com kana Microsoft Dynamics asi CRM haina kudikanwa - yako yekutengesa timu inogona kupinda mukati kuti ione ruzivo rwese rwakaunganidzwa.
Tags: kushandurwa kushandurwaZiva zvinotungamirakuziva vashanyiMicrosoft Dynamicssalesforcechiratidzo chevashanyi
Cirrus Insight: Salesforce uye Kubatanidzwa kweGmail